गर्भावस्था – Health Post Nepal
सामान्यतया दम्पतीले एक वर्षसम्म परिवारनियोजनको कुनै पनि साधनको प्रयोगविना शारीरिक सम्बन्ध राख्दा पनि बच्चा नभएको अवस्थालाई बाँझोपन भन्ने गरिन्छ । बाँझोपन प्राइमरी तथा सेकेन्डरी गरी दुई प्रकारका हुन्छन्। प्राइमरी बाँझोपनमा कहिले पनि बच्चा बसेकै हुँदैन भने सेकेन्डरीमा एकपटक बच्चा...
महिलाको मुटुको चाल सामान्य अवस्थामा सामान्य भए पनि गर्भवती अवस्थामा भने मुटुको चाल फेरबदल भइरहन्छ। सामान्यतया गर्भवतीका बेला मुटुको चाल पहिले भन्दा बढ्दछ। कसरी थाहा पाउने सामान्य मुटुको चाल? गर्भ अवस्थामा धड्कनको गति यत्ति नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर...
गर्भावस्थामा महिलाहरूले आफ्नो विशेष ख्याल गर्नुपर्छ। गर्भावस्थामा आमाका साथै गर्भमा रहेको शिशुलाई पनि पोषणको खाचो हुन्छ। तर, पोषिला खानेकुरा खनुपर्छ भन्दै गर्दा केही खाने कुराले भने गर्भावस्थामा स्वास्थ्यमा हानी पुर्याउँछन्। त्यसैले गर्भावस्थामा व्यालेन्स डाइट लिनु जरुरी हुन्छ। मेवा काचो...
पुरुषले पनि बच्चा जन्माउन सक्छन् र? यो कुनै काल्पनिक कुरा होइन। एक पुरुषले बच्चालाई जन्म दिएका छन्। बच्चालाई जन्म दिने व्यक्ति ट्रान्सजेन्डर पुरुष हुन्। विश्वको पहिलो गर्भवती यी पुरुष तीन बच्चाको पिता बनिसकेका छन्। वास्तवमा पहिले गर्भवती पुरुष थामस...
ढिलो र चाँडो गर्भवती हुनुका जोखिम
गर्भावस्थामा उमेरअनुसारका चुनौती धेरै हुन्छन्, जसलाई दुई भागमा विभाजन गरेर हेर्न सकिन्छ, बढी उमेरमा गरिने गर्भाधारण र कम उमेरमा गरिने गर्भाधारण । यी दुवै अवस्थामा गर्भाधान आमा र बच्चा दुवैका लागि चुनौतीपूर्ण हुन्छ । ढिलो गर्भधारण गर्दा र चाँडो...
‘आमा’ बन्नु एउटा ठूलो महत्वको कुरा हो । महिलामा आमा बन्ने योग्यताअनुरूप अंग–प्रत्यंगको निर्माण र विकास भएको हुन्छ । शरीरको बनावट, हर्मोनको प्रभाव, जनेन्द्रीयको विकासले गर्दा एउटी महिला आमा बन्न सक्छिन् । गर्भ महिलाको पाठेघरमा रहन्छ । पुरुषको शुक्रकीट...